A ga -egosi Huawei Mate 30 na Septemba 19 n'ihu ọha Androidsis
Huawei Mate 30 ga-abụ ụdị ndị ọzọ dị elu na-esote site na ika China, nke ahụ ga-abata na nhazi ọhụrụ. Ekwuru ya na izu ole na ole ga-egosi ekwentị na Septemba. Enweela asịrị banyere ụbọchị ịgba akwụkwọ a ga - ekwe omume ma ha ga - ahapụ anyị nke ọhụrụ, nke na - abịa site na ọtụtụ ndị leakers.
Dabere na data ndị a, anyị nwere ike ịtụ anya nke ahụ ngosi nke Huawei Mate 30 emere na Septemba. Ọ bụrụ na asịrị ndị a bụ eziokwu, n'ime otu ọnwa anyị ga-amaworị ọhụụ ọhụrụ a nke akara ndị China, nke na-ekwe nkwa ịbụ otu n'ime mpaghara ndị kachasị ewu ewu nke ọnwa ikpeazụ nke afọ.
Ebe ọ bụ na dị ka data ndị a, Ọ ga-abụ Septemba 19 mgbe Huawei Mate 30 na-eze n'ihu. N'ime izu ndị a, e nweela asịrị ndị na-ezo aka na ngosi n'etiti ọnwa, yabụ ọhụụ ọhụrụ a yiri ka ọ dabara na nke a. Modelsdị atọ ga-abụ ndị na-abịarute: nke nkịtị, nke Pro na ụdị Lite.
Nke a nwere ike ịpụta na ekwentị ndị a gaa ire ere na ngwụcha Septemba ma ọ bụ mmalite Ọktọba. Ebe ọ bụ na a na-ebuputakarị ha n'ụlọ ahịa na izu ole na ole mgbe ha gosipụtara. Mana nke mbụ, anyị ga-echere ka ụbọchị nkwenye a kwenye.
Huawei Mate 30 rutere n'otu oge dị nro maka ndị na-emepụta China, nke na-aga n'ihu na-ata ahụhụ nsonaazụ ya, ọkachasị nke ejighị n'aka, nke nsogbu dị n'etiti China na United States. Maka ugbu a enwetala nkwekọrịta nke ụbọchị 90 ọzọ, nke kwesiri inye gi obi iru ala.
Anyị ga-ege ntị data ohuru na-abia na Huawei Mate 30 a. Otu ihe dị mkpa maka ndị na-emepụta China, ebe ọ bụ na ha abụrụla otu n'ime ndị na-ere ahịa n'ahịa dị elu. Na mgbakwunye, ruo n'afọ a ha na-ewe ihe ubi ezigbo ahịa na ezinụlọ P30, nke na-eme nke ọma n'ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei Mate 30 nwere ike ịnwe ụbọchị ngosi